Ubuntu Touch OTA-8 efa misy izao, tonga miaraka amina lohahevitra maizina | Ubunlog
Ora vitsy lasa izay, ny fiarahamonina UBPorts dia namoaka ny Ubuntu Touch OTA-8. Lazainay ny vondrom-piarahamonina fa tsy Canonical satria ny orinasa notarihin'i Mark Suttheworth dia nandao ilay tetikasa rehefa hitan'izy ireo fa tsy azo atao na tsy hevitra tsara toy izany ny manana rafitra fiasa mitovy amin'ny finday toy ny amin'ny solosaina. Ankehitriny dia ny vondrom-piarahamonina mpamorona izay mifantoka amin'ny fandefasana fanatsarana ho an'ny finday mampiasa Ubuntu Touch.
OTA-8 dia misy fanohanana ny lohahevitra maizina
Lohahevitra maizina ao amin'ny OTA-8
Na dia toa tsy vitsy intsony aza ireo fanatsarana voalaza etsy ambony ao amin'ny Morph Browser, ny tena mahasarika ny saina hatrany dia ny maso. Eny, miaraka amin'ny Ubuntu Touch OTA-8 fanohanana lohahevitra maizina izay ao anatin'ny dingana andrana ankehitriny. Araka ny hitanao amin'ny sary teo aloha, ny ankamaroan'ny zavatra aseho dia mainty, miaraka amin'ny faritra volondavenona ary ny sary masina ihany no mitazona ny endrika sy ny lokon'ny lohahevitra amin'ny toerana misy anao.
Ny lisitry ny vaovao dia vita miaraka amin'ireto manaraka ireto:
Ny kaontenera ny teny Android preboot dia nohavaozina ho halium-boot.
Ny fiasa fanandramana Ubuntu UI Toolkit dia namboarina.
Nesorina Lisitry ny lisitra tsy ilaina nasongadina ao amin'ny Fikirana sy "Ampio mpandray" ao amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra.
Nanampy fanampiana ho an'ny ARM64 (AArch64). Io dia hahafahan'ny mpamorona hitondra ny Ubuntu Touch amin'ny fitaovana maro hafa.
Niampy fanatsarana ny tethering amin'ny alàlan'ny USB.
Fanitsiana isan-karazany amin'ny olana izay tao amin'ny app agenda.
Ny fanavaozana dia tonga amin'ny fitaovana rehetra manohana tsikelikely ary ny tsirairay dia tokony hanana izany amin'ny alahady 10 martsa ho avy izao. Anisan'ireo fitaovana mifanentana ananantsika ny Fairphone 2, Nexus 7, Nexus 5, Nexus 4, BQ Aquaris E5, BQ Aquaris E4.5, BQ Aquaris M10 FHD, BQ Aquaris M10 HD, Meizu MX 4, Meizu PRO 5 ary OnePlus One.
Manana fampahalalana bebe kokoa momba ny fanavaozana Ubuntu Touch OTA-8 ianao amin'ny Ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu Touch OTA-8 efa misy izao, tonga miaraka amina lohahevitra maizina
Ny Plasma 5.12 LTS dia nohavaozina miaraka amina endrika vaovao maro
Misy fanavaozana ny fiarovana Kernel vaovao ho an'ny Ubuntu 18.04